Amanqaku kaDan Pantelo kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Dan Pantelo
UDan ungumphathi weteknoloji yokuthengisa kunye nomseki / i-CEO ye UMarpipe. Ngaphambi kokuseka iMarpipe, uDan uqalise ingcebiso yokuthengisa kwigumbi lakhe lokulala ekholejini, eyajika yaba yiarhente ekhula ngokukhawuleza eseSoho, eManhattan egxile kwimveliso yokuyila kunye nemfuno yokuvelisa amashishini eDTC. IMarpipe yaqala yaphuhliswa xa i-arhente ingena engxakini ngovavanyo lobuchule, kwaye namhlanje, iMarpipe inyuse ngaphezulu kwe-10 yezigidi zeedola ukusuka kwizinto ezithandwa yi-Adobe, Samsung, kunye nabaphathi eBuzzfeed, Hubspot, MediaMath, kunye neCriteo.
NgoLwesithathu, uDisemba 22, 2021 NgoLwesithathu, uDisemba 22, 2021 Dan Pantelo
Kangangeminyaka, abathengisi kunye nabathengisi baxhomekeke kubaphulaphuli abajolise kwidatha ukuze bazi ukuba kuphi na phambi kwakhe ukuba baqhube uyilo lwabo lwentengiso. Kodwa utshintsho lwakutsha nje olusuka kwiindlela ezihlaselayo zokumbiwa kwedatha-isiphumo semigaqo emitsha neyimfuneko yabucala ebekwe yi-GDPR, CCPA, kunye ne-Apple's iOS14 - ishiye amaqela entengiso egxalathelana. Njengoko abasebenzisi abaninzi bephuma ekulandeleni umkhondo, idatha ejolise kubaphulaphuli iba ngaphantsi kwaye ithembekile. Iimpawu eziphambili zentengiso